"Nabadda Qudus" oo ku xiran wada hadal ay yeeshaan Falastiin iyo Israa'iil - BBC News Somali
Image caption The Pope Frances
Baadariga ugu sareeya madaahibta Catholic-ga ee masiixiyadda, Pope Francis ayaa ku baaqay "nabadda Qudus" iyo wada hadal dhexmara Falastiin iyo Israa'iil.
Isagoo garwaaqsaday "xiisadda sii kordheysa" ee labada dhinac ka dhexeysa, wuxuu ku booriyay in ay yeeshaan "wada xaajood xal raadin ah... kaas oo ogolaanaya wada noolaansho nabadeed oo u dhexeeya labo dal".
Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump, wuxuu dhowaan ku baaqay in Qudus uu u aqoonsaday in ay tahay caasimadda Israa'iil.
Isbuucii la soo dhaafay, Xubnaha golaha loo dhan yahay ee Qaramada Midoobey ayaa si aqlabiyad ah u taageeray qaraar lagu cambaareyay go'aankii Trump.
Qaraarka wuxuu dhigayay in go'aan kastoo ku wajahan mansabka Qudus uu yahay "mid aan waxba ka jirin", ayna tahay in la joojiyo.
Image caption Midowga Yurub oo Netanyahu ka diiday dalabka Qudus
"Munaasabadda maanta, aan Alle ku weydiisano nabadda Qudus iyo dhammaan dhulka barakeysan," ayuu yiri.
"Aan ku duceysano in rabitaan wada hadal nabadeed uu Alle dhex dhigo dhammaan dhinacyada, iyo in ugu dambeyn la gaaro wada xaajood uu xal ka dhasho. Mid fududeynaya in ay nabad ku wada noolaadaan laba dal oo leh xuduud ay ku heshiiyeen, caalamkuna aqoonsaday."
Mareykanka ma keli buu ku yahay go'aankii Qudus?
Waxay ku biirtay Mareykanka iyo Israa'iil iyo dalal kale sida, Honduras, Jasiiradaha the Marshall, Micronesia, Nauru, Palau iyo Togo, kuwaas oo ka soo horjeestay qaraarka Qaramada Midoobey ee lagu cambaareeyay Trump.
Sikastaba, 128 dal ayaa taageeray qaraarkaasi oo Mareykanka ka dalbaday in uu ka noqdo go'aanka uu Qudus ugu aqoonsaday in ay tahay caasimadda Israa'iil.